Kunesibalo esandayo sabathengisi bemfashini abakwi-inthanethi abanamanani ama-dollar ayisigidi. NgoMashi we-2015, umthengisi wemfashini wokunethezeka uFarfetch wabekwa ku- $ 1bn. Noma kunjalo, ukubalwa kwentengo kungabhekwa njegokuncishiswa okuthile ngabathile, uFarfetch akuyena skupnohela kwabathengisi bemfashini abakwi-inthanethi abanamanani ayizigidi eziningi. Gal Gal, I-Lucky Group, I-Shoe Dazzle kanti nabanye abaningi baye baxhaswa ngemali yezimali zokuzibophezela ukuze kutholakale amashumi ezinkulungwane zamaRandi.
Ngakho-ке Uma unokuthambekela okubheke emcabangweni, wokuthi ungaqala ibhizinisi lokuthengisa ngemfashini elingelakho, ngizokukhombisa ezintweni ezimbalwa ezisiza ukwenza ukuba abathengisi bemfashini онлайн bakuphumelele ngemuva kokuchaza uhlobo lwewebhusayithi okufanele ngabe uyibheka ukwakha.
3 Ukuqhafaza I-Industry Industry
3.1 Ukubhuloga, Ukumaketha Nokuthuthukiswa Kamamalungu Othando Lwezakhiwo Zomphakathi
3.3 Фунда кабанзи
Ngokunye, ungase futhi uqale isitolo sefashini Ondaga. Shopify yindlela engcono kakhulu yokwakha noma yikuphi iwebhusayithi yokuthengisa okufaka phakathi amawebhusayithi wefashini.
Ngingancoma noma WPEngine (Ukusingathwa kwe-WordPress ephethwe, thola i-20% usebenzisa ikhodi yokuphromotha "WPE20") noma usebenzisa IVPS yolwandle lwedijithali. Futhi uma uthatha isinqumo sokuhamba neseva yangasese yangasese noma ukusingathwa okwabiwe, uzodinga insiza ye-CDN efana MaxCDN ukukhonza izithombe zakho. Izingosi zefashini zivame ukuba abezindaba eziyindayo futhi i-CDN izosiza ukugcina umbane wakho wewebhu ube lula.
Ngaphandle kwalokho, uzodinga ama-plugins ambalwa ama-webhusayithi we-WP angawathola ewusizo. Ngicabanga nokuthi ukwenziwa kweinjini yokusesha kanye nokufakwe kunqolobane yesiza kuzobaluleka kakhulu. Ngingancoma I-WP Rocket futhi I-Yoast SEO ukusiza ngokulungiselela ukulondolozwa kwenjini nokusesha.
Ukuqhafaza I-Industry Industry
Ngigxile kulokhu, ngoba angicabangi ukuthi empeleni ukusetha kanye nokwakha iwebhusayithi yemfashini kuyinto enselela kunazo zonke. Ngizwa ubunzima obukhulu ekwakheni inkampani ephumelelayo yokuthengisa ngemfashini online ilele ekwazini ibhizinisi nasekukwazini ukwakha umkhiqizo oqinile.
Ukubhuloga, Ukumaketha Nokuthuthukiswa Kamamalungu Othando Lwezakhiwo Zomphakathi
Ukube bengingaqala iblogi yemfashini namuhla, ngizohluleka kabi. Ngani? Ngilahlekelwe ngomusa olwazini ngomkhakha wezemfashini. Унгати, „кухня! Lokhu kuyiqiniso kunoma yimuphi imboni ”. Kungenzeka kube njalo, kodwa ngicabanga ukuthi kuyiqiniso ikakhulukazi embonini yezemfashini futhi kuseduze ukuba kungenzeki ukuzizwa unesithakazelo sangempela nentshisekelo yemfashini.
Abantu abathengi izingubo noma imikhiqizo yefashini ngoba bayathanda ngempela. Bathenga izingubo nemikhiqizo yefashini ngoba bangathanda ukuthola isitembu sokuvunywa komakhelwane babo, abangane babo nabathandekayo babo. Futhi imfashini yezinga eliphezulu ingathinta indlela abantu abakubona ngayo.
Ungakhulisa ukuphindeka komkhiqizo wakho ngokudala ukuzihlanganisa okuhle. Njengoba abantu abaningi ngokwengeziwe behlobanisa uhlobo lwakho lomkhiqizo njegokuthile abangathanda ukukubona uqobo lwabo okuhambisana nabo, umkhiqizo wakho uba namandla ngokwengeziwe. Zonke izinyathelo ozithathayo kuloluhambo kufanele zenzelwe ukukhulisa inani lomkhiqizo lomkhiqizo wakho.
UMaria Sharapova ungumdlali we-тенис omkhulu futhi wenza имат eyi- $ 22 милиона ngokuvumela futhi okwamanje kuphela okungaphezu kwezingu- $ 2 wezigidi nge-турнири zangempela.
Ngoba umsubathi ongathengiswa kakhulu futhi yisizathu esifanayo esenza ukuthi abahola cishe bonke abanye abadlali bomdlalo wetennis abangaba ngcono kunaye kwithenisi. Ngimthatha ngoba umehluko wemali engenayo ngokusebenzisa umsebenzi oyisisekelo wokuthola има ngama-одобрения kwisilinganiso se-10: 1. Uzothola ukuthi okufanayo kuyasebenza kakhulu komunye umdlalo othengiswayo. Abathandi bebhola, amaWorld Champions шампион ку-шах kanye nabasubathi абангама-Olimpiki bonke benza има enhle ngokwenza izincomo.
Enye в ejwayelekile phakathi kwabo bonke abathengisi bemfashini abaphumelelayo engiyicwaningile – bonke banendaba eyingqayizivele nethembekile yokudlulisa. Ukuzama ukuqala isitolo sezitolo zemfashini ngaphandle kwendaba nophawu ongalukhulisa kahle kufana nokuzama ukukala intaba emimvini.
Ungafunda futhi okuthunyelwe kwamuva ku-WHSR ngu-Джина Бадалати – "Izindlela eziphumelelayo ze-6 zokuDrayivu i-Traffic eyengeziwe ukuya kumabhulogi wakho wefriji".
Okokugcina, ngithanda ukukukhomba lapho uthola khona izihloko ezimbili ezinhle kakhulu ezibonisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukumaketha, maqondana nokwakha isitolo semfashini esiku-inthanethi noma esingaxthy ntha esingwexhey.
Indlela Yokwakha I-Multi Million Mill Dollar eCommerce Ibhizinisi Nge-Почти $ 0 $ ъnge-бюджет Yokuthengisa.
Kunesibalo esandayo sabathengisi bemfashini abakwi-inthanethi abanamanani ama-dollar ayisigidi. NgoMashi me-2015, umthengisi wemfashini wokunethezeka uFarfetch
Kunesibalo esandayo sabathengisi bemfashini abakwi-inthanethi abanamanani ama-dollar ayisigidi。 NgoMashi We-2015年，Umthengisi wemfashini wokunethezeka uFarfetch wabekwa
Kunesibalo esandayo sabathengisi bemfashini abakwi-inthanethi abanamanani ama-dòlar ayisigidi. NgoMashi we-2015, umthengisi wemfashini wokunethezeka uFarfetch
Գաղափարի սկսնակներ. 20 արտահայտություններ ՝ օգնելու ձեզ գալու թեմաների շուրջ ՝ գրելու մասին